Biometrika : Tsy tena izy, fa hay plastika -
AccueilSongandinaBiometrika : Tsy tena izy, fa hay plastika
Biometrika : Tsy tena izy, fa hay plastika
04/10/2018 admintriatra Songandina 0
Vaovao nanaitra ny maro androany, ny filazana fa tsy mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena ny fahazoan-dalana hitondra fiara biometrika sy ny “carte grise” biometrika, ka tsy maintsy hosoloina. Io no nambaran’ny tale jeneraly eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, Théodore Randriamahenina, nandritra ny valandresaka ho an’ ny mpanao gazety omaly. Tsotra ny fanazavana nomen’ny tale eo anivon’ity minisitera ity, tsy mifanaraka amin’ ny fenitra iraisam-pirenena ireo karatra roa ireo. Manoloana izany dia hosoloina avokoa ireo fahazoan-dalana hitondra fiara sy “Carte Grise” rehetra, ary amin’ ity indray mitoraka ity dia tena ilay biometrika no hanaovana azy. Ny mba nampietam-po kosa dia ny fanazavana fa “ hatao maimaim-poana ny fanavaozana ho an’ ireo efa nahazo izany, ary ho an’ ireo izay vao hangataka dia misy ny sariny mitovy amin’ny teo aloha ihany” hoy Théodore Randriamahenina.
Hiara-dalana amin’ ity fanovana ity kosa ny fitadiavana sy fifanarahana vaovao, amina mpandraharaha hafa. Efa tapitra rahateo ny fifanarahana tamin’ilay orinasa nanao izany teo aloha, hoy ny tale jeneralin’ny fandraharahana anivon’ny MID, noho izany dia hampiasa fitaovana manaraka ny fenitra takiana amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny eo anivon’ny faritany, ahafahana mamoaka sy mizara karatra tena izy, na karatra tena biometrika. Taorian’ny fivoahan’ny vaovao, dia maro ireo olona no sorena. Tsiahivina fa efa nisy ny olana maro sy fimenomenonana tamin’ny fanoloana ny karatra fahazoan-dalana hitondra fiara ho biometrika ity, satria amin’ ny 2 ora maraina dia efa milahatra etsy Ambohidahy. Izao izany vao mainka mitombo ny fimenomenonana, satria hiverina hilatra amin’ ny roa ora maraina indray. Na tsy nanazava firy aza ny teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, dia azo hatongilana any amin’ ilay orinasa nanao ny asa ny zava-mitranga. Tsy iza izany orinasa izany fa ny Ametis, ary tokony hisy fepetra hentitra raisina amin’ izy ireo. Hosoka sy fanaovana hosoka, ary halatra tsotr’izao no hisokajiana ny zava-miseho.
Manoloana ny fahaverezan’ny antotan-taratasy mikasika ny raharaham-pitsarana, izay nahavoaheloka an-dRavalomanana mandra-pahafatiny, dia niloa-bava omaly ny mpisolovava sady solombavambahoaka manaraka azy, i Hanitra Razafimanantsoa. Nahagaga ihany ny valinteny nentin’ ity mpisolovava ity satria dia olona eo ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina : “Vaindohan-draharaha ny fametrahana fahasalamana mendrika”
Raharaha 7 Febroary 2009 : Mbola feno mistery!